MDC-T Inoti Hapana Zvati Zvoonekwa Zvakagonwa neHurumende yaVaMnangagwa
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC-T, VaNelson Chamisa, vanoti hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa haina chayakaita chinobatika kubva pakapinda VaMnangagwa muhutongi uye yave kuronga kubirira sarudzo zvakare.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House, VaChamisa vati VaMnangagwa hapana chavati vaita mumazuva zana vapinda muhurumende kunyange hazvo vakavimbisa pavakatora mhiko kuti vachavandudza hupfumi hwenyika pamwe nekugadzirisa zvose zvinoita kuti munyika muve nehutongi hwejekere.
Asi VaMnangwagwa pachavo vakati hurumende yavo yakaedza kukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika vachiti pane vekunze vakavimbisa kuti vachazosima mari yavo muZimbabwe inosvika mabhiriyoni matatu emadhora.
Panyaya yegakava riri mubato ravo rekuti ndiyani akafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo, VaChamisa vati vari kuedza napose pavanogona napo kuti pave nekuwirirana pakati pavo naMuzvare Thokozani Khupe.
Asi Muzvare Khupe havana kupinda musangano weStanding Commmittee yabato iri uyo waitirwa paHarvest House uyo wapindwawo naVaElias Mudzuri naVaDouglas Mwonzora vanove vevamwe vari kuti VaChamisa havana kugadzwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo rebato kuti vafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo zvichitevera kushayika kwakaita VaMorgan Tsvangirai.
Hatina kukwanisa kutaura naMuzvare Khupe kuti tinzwe kuti sei vasina kuuya kumusangano uyu uye kuti vachapindawo here mumusangano wekomiti yepamusoro-soro yebato iri yeNational Council uyo wakatarisirwa kuitwa mangwana.
Asi mumwe wevasiri kutsigira kugadzwa kwaVaChamisa uye murongi wemisangano muMDCT, VaAbednigo Bhebhe, vaudza Studio7 parunhare vari kuBeitbridge kuti vatsanangurira VaChamisa zvikonzero zvavo zvaita kuti vasauye kumusangano kunyange hazvo varamba kutaura zvikonzero izvi pamwe nematanho avachatora kugadzirisa kusawirirana kuri mubato ravo panyaya dzehutungamiri hwebato.
Zvichakadai, VaChamisa vati pane imwe kambani yekuIsrael yavari kufungidzira kuti iri kushandiswa nehurumende yaVaMnangagwa kuti izobirira musarudzo dzegore rino.
MDC-T inoti yakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro musarudzo dza2013 idzo dzakahwinwa neZanu PF pachishandiswa kambani yekuIsrael zvakare inonzi Nikuv kunyange hazvo Zanu PF ichiti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano re Revolutionary Research Institute of Zimbabwe, VaTjenesani Ntungagwa, vaudza Studio 7 kuti MDCT inofanira kutora matanho akasimba iye zvino kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena.
VaChamisa vatiwo vari kuedza kutaurirana nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, avo vari kutungamira bato reNational People’s Party, kuti vapinde musarudzo dzegore rino vakabatana.
Pari zvino, mubatanidzwa weMDC Alliance une mapato manomwe anoti achaita chirwirangwe kuti agokunda Zanu PF musarudzo dzegore rino.